News - ရေသိုလှောင်မှုအတွက်တိကျမှန်ကန်သောကိရိယာများ၊ ဥပမာအားဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ရေကယ်ဆယ်ရေးစက်ရုပ်များ၊
ရေဘေးဒုက္ခသည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်တွင်အကြီးမားဆုံးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူများသည်တန်ပြန်အစီအမံများပိုမိုပြုလုပ်လာကြသည်။ ကျွန်ုပ်နိုင်ငံတွင်ရေကြီးမှုကြောင့်ပြိုကျသောအိမ်များနှင့်သေဆုံးမှုအရေအတွက်သည်များသောအားဖြင့်ကျဆင်းနေသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်နိုင်ငံတွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ ဦး ရေမှာ ၁၀၀၀ အောက်သာရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရေလွှမ်းမိုးမှုစွမ်းအားမှာမပြောင်းလဲသေးကြောင်းသက်သေပြနေသည်။
၂၀၂၀၊ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် Guizhou ပြည်နယ်၊ Zunyi City, Tongzi County ၏မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်များသည်ဒေသတွင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သည်။ မြို့နယ် ၃ ခုတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် Tongzi ကောင်တီရှိမြို့အမျိုးမျိုးကိုဒီဂရီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ရေကြီးခြင်းကြောင့်အိမ်များပြိုကျခြင်းကြောင့်လူ ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုကြိုတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်စာရင်းအင်းများအရသိရသည်။ ၁၀,၅၁၃ ဦး ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီး ၄,၁၂၇ ဦး သည်အရေးပေါ်ဘဝအကူအညီလိုအပ်သည်။ အချို့မြို့များရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုနှင့်ကွန်ယက်အချက်ပြမှုပြတ်တောက်မှုကြောင့်ယွမ် ၈၂.၈၉ သန်းအားတိုက်ရိုက်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေခဲ့သည်။
ရေကယ်ဆယ်ရေးသည်ရုတ်တရက်ပြင်းထန်ခြင်း၊ အချိန်တိကျခြင်း၊ မြင့်မားသောနည်းပညာလိုအပ်ချက်များ၊ မြင့်မားသောကယ်ဆယ်ရေးအခက်အခဲနှင့်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုများနှင့်အတူကယ်ဆယ်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည်လူများကိုကယ်တင်ရန်မြစ်ထဲသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားသောအခါသူတို့သည်အလွန်အန္တရာယ်များသောကြောင့်လူများကိုကယ်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကျဆင်းခြင်း၏ထင်ရှားသောလက္ခဏာများမရှိပါ။ ရေနစ်သေဆုံးသူကိုရှာရန်သူတို့ကareaရိယာကြီးတစ်ခုတွင်အချိန်အကြာကြီးရှာဖွေရန်လိုသည်။ ဤအချက်များသည်ရေထဲတွင်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အတားအဆီးများကိုတိုးပွားစေသည်။
ယနေ့တွင်စျေးကွက်တွင်ခေတ်မီဆန်းပြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်အားနည်းချက်များရှိနေသေးသည်။ အောက်ဖော်ပြပါများမှာရေကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာ၏ပြsomeနာများဖြစ်သည်။
၁။ သင်္ဘော၊ ကမ်းခြေ၊ သို့မဟုတ်လေယာဉ်ပျံမှရေပေါ်သို့ပစ်ချသည့်ရေကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာများသည်လှိမ့်သွားနိုင်သည်။ အချို့သောရေကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာများသည်ကားရှေ့သို့အလိုအလျောက်လှန်လှောခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုနှောင့်နှေးစေပါသည်။ ထို့အပြင်လေနှင့်လှိုင်းများကိုခုခံနိုင်စွမ်းသည်မကောင်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ၂ မီတာကျော်လှိုင်းလုံးတစ်ခုကိုသင်ကြုံတွေ့ရပါကအသက်ကယ်ကိရိယာများသည်အသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသောရေအောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရလိမ့်မည်။
၂။ ရေကယ်လွှတ်မှုပြုလုပ်သောအခါနိုင်ငံခြားစက်ရုံများ၊ ရေ၊ ပလပ်စတစ်အမှိုက်စသည်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံခြားပစ္စည်းများသည်ပိတ်မိနေသောသူများသို့မဟုတ်အသက်ကယ်ကိရိယာများကိုလည်ပင်းညှစ်သတ်မိနိုင်သည်။ အချို့သောပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပန်ကာများသည်အထူးအကာအကွယ်အဖုံးကိုမသုံးပါ၊ ၎င်းသည်နိုင်ငံခြားပစ္စည်းများအားလူ့ဆံပင်နှင့်ထိတွေ့မှုမှတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လျှို့ဝှက်အန္တရာယ်များကိုတိုးပွားစေသည်။
၃။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများအရလက်ရှိရေကယ်ဆယ်ရေးဝတ်စုံများသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိဘဲဒူးထောက်ခြင်းနှင့်တံတောင်ဆစ်များကိုအားဖြည့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့၏ကာကွယ်မှုနှင့်ဝတ်ဆင်မှုကိုအားနည်းစေသည်။ ဇစ်၏ထိပ်တွင်ဇစ်ကိုတပ်ရန် velcro မတပ်ဆင်ထားပါ၊ ၎င်းမှာဇစ်သည်ရေအောက်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအခါချရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဇစ်လွယ်ကူစွာဝတ်ဆင်ရန်ခဲယဉ်းသောဇစ်အိတ်ကပ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်မဟုတ်။
ROV-48 မောင်းသူမဲ့ရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောသည်ဝေးလံခေါင်ဖျား။ ဝေးလံသောဒေသများရှိရေတိမ်ပိုင်းရှာဖွေရေးနှင့်မီးသတ်သမားများအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးစက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေလှောင်ကန်များ၊ မြစ်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ ကူးတို့၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အခြားမြင်ကွင်းများတွင်ရေကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အထူးအသုံးပြုသည်။
ယေဘုယျအားစွမ်းဆောင်ရည် parameters တွေကို
1. အများဆုံးဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေး: :2500m
၂။ အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း: :45km / h
ကြိုးမဲ့ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်သည့်အသိဉာဏ်ပါဝါအသက်ကယ်လှေသည်အဝေးမှလည်ပတ်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်ကယ်ဆယ်ရေးစက်ရုပ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေကူးကန်များ၊ ရေလှောင်ကန်များ၊ မြစ်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ ရွက်လှေများ၊ ကူးတို့၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ရေပြိုကျခြင်းအတွက်အခြားမြင်ကွင်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. အရွယ်အစား: 101 * 89 * 17cm
၂။ အလေးချိန် - ၁၂ ကီလိုဂရမ်
3. ကယ်ဆယ်ရေးဝန်စွမ်းရည်: 200 ကီလိုဂရမ်
4. အများဆုံးဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေး 1000 မီတာဖြစ်ပါတယ်
5. အဘယ်သူမျှမ - ဝန်မြန်နှုန်း: 6m / s ကို
၆။ မြန်နှုန်း - ၂ မီတာ / s
၇။ မြန်နှုန်းနိမ့်ကျခံနိုင်သောအချိန် - ၄၅ မိနစ်
၈။ အဝေးထိန်းအကွာအဝေး - ၁.၂ ကီလိုမီတာ
1. အခွံကို LLDPE ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကောင်းမွန်သော wear ခံနိုင်မှု၊ လျှပ်စစ်ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊
၂။ ခရီးအကွာအဝေးတစ်လျှောက်အမြန်ကယ်ဆယ်နိုင်ခြင်း။ ကုန်တင်မြန်နှုန်း - ၆ မီတာ / စ; လူလိုက်ပါနိုင်သော (80Kg) မြန်နှုန်း: 2m / s ။
၃။ သေနတ်အမျိုးအစားအဝေးထိန်းကိုအသုံးပြုပြီးလက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ပြီးလည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်။ ပါဝါအသက်ကယ်လှေကိုတိကျစွာအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
GPS စနစ်နေရာချထားခြင်း၊ အချိန်မှန်နေရာချထားခြင်း၊ ပိုမိုမြန်ဆန်။ တိကျသောတည်နေရာများကိုထောက်ပံ့ပါ။
၇။ ၎င်းသည်နှစ်ဖက်မောင်းနှင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ လေနှင့်လှိုင်းကြီးများတွင်ကယ်တင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
၈။ ၎င်းသည် ဦး တည်ချက်၏မှန်ကန်သောမှန်ကန်မှုကိုထောက်ခံသည်။ လုပ်ငန်းသည် ပို၍ တိကျသည်။
၉။ Propulsion method - Propeller propeller ကိုသုံးပြီးအချင်း ၀ က်ဟာ ၁ မီတာအောက်မှာရှိတယ်။
၁၀။ လီသီယမ်ဘက်ထရီကို အသုံးပြု၍ အမြန်နှုန်းသည်ခံနိုင်ရည်သည် ၄၅ မိနစ်ထက်ပိုသည်။
11. ဘက်ပေါင်းစုံအနိမ့်ဘက်ထရီနှိုးဆော်သံ function ကို။
(၁၃) အလယ်အလတ်ဒဏ်ရာကိုရှောင်ပါ။ ရှေ့တွင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်သောရှေ့ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးကာကွယ်ရေးချွတ်သည်။
၁၄။ အရေးပေါ်အသုံးပြုမှု - ၁ ခလုတ်နှိပ်၊ အစာရှောင်ခြင်း၊ ရေထဲသို့ကျသောအခါအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း။